NATO | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Please don’t act likeafrog in the water of the footprint ofabullock
An appeal letter to Rakhine secessionist who wrote this:
ကျနော် ခွဲထွက်ရေးသမား | Arakan Review arakanreview.net
မျက်မှောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွင် ခွဲထွက်ရေးပြဿနာသည် အဓိကအချက်အနေဖြင့် ပါဝင် နေသည်။ တချို့က ခွဲထွက်ခြင်း၏ အကျိုးအပြစ်များကို စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီးမှ ခွဲ မထွက်သင့်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိကြသည်။ တချို့လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲမထွက်သင့်ဟု အမြင်ရှိကြသည်။
Rajendra Chola’s Territories c. 1030 CE
This is notatime to act likeafrog in the water in the footprint ofabullock or to enjoy the moonlight in the hollow of the bamboo but the era of Globalization. No man is an island.
Tags:Asean, Buddhism, Burma, India, Khin Nyunt, Myanmar, NATO, Rakhine State